ရန်ကုန်မြို့မှာ မင်းမဲ့စရိုက်ဆန်ဆန်လုပ်ချင်တာလုပ်ခွင့်ရနေပြီလား – Popinvdo
ရန်ကုန်မြို့မှာတောင်မင်းမဲ့စရိုက်ဆန်ဆန်မူးရူးပြီးလုပ်ချင်တာလုပ်ခွင့်ရနေပြီလား? ။ ဒီနေ့မနက်စောစောကန်တော်ကြီးပတ်လမ်းထဲတွင်ကားမောင်းနေရင်း ကားတစ်စီးကအတင်းမရမကလိုက်ကျော်တက်ဖို့လုပ်နေတာကြုံရတယ်
လမ်းကလဲကျဉ်းနေတာဆိုတော့ ပြီးတော့အောက်လမ်းကြောမှာ လဲရပ်ထားတဲ့ကားတွေရှိတာနဲ့ကျော်တက်ဖို့ကအဆင်မပြေဘူး ဘေးနားကနေလီဗာအတင်းနင်းပြီးအရှေ့ကို အတင်းပြန်ဝင်ဖို့လုပ်နေလို့ နဲနဲစိတ်တိုလာတာနဲ့ခပ်မြန်မြန်မောင်းလိုက်မိတယ်
ပြီးလဲပြီးရောမီးပွိုင့်မိတော့ဘေးကွေ့ကြောကနေကျော်ပြီးမီးပွိုင့်လမ်းမပေါ်ကိုကန့်လန့်ရပ်တယ် …..ဆဲတာကလဲအမျိုးကိုစုံနေတာပဲ taxiနဲ့လူကငါးယောက်လောက်ပါတယ်ကားထဲကိုအခြေနေကြည့်ပြီးတစ်ယောက်ထဲဆိုတော့ပြသနာလုပ်ဖို့ဆင်းလာပြီးမှန်လာခေါက်တယ်
မီးကစိမ်းနေတာတောင် ကန့်လန့်ကြီးမီးပွိုင့်ထိပ်မှာပိတ်ရပ်ထားတယ် sorryပါ သတ္တိမရှိတာမဟုတ်ဘူး …မူးရူးပြီး ငါးယောက်တစ်ယောက်ဆွမ်းကြီးဝိုင်းလောင်းဖို့လုပ်နေတဲ့ကောင်တွေနဲ့ရန်ဖက်ဖြစ်လောက်ရအောင်ဉာဏ်မနည်းဘူး ဦးနှောက်ရှိတယ်လေ
ပြီးတော့ကားကိုလမ်းမပေါ်ကနေပြောင်းပြန်တွေကွေ့သွားတယ် ရုပ်ရှင်တွေထဲကအတိုင်းပဲ ဘုရားစူး street fighter တွေ တစ်ယောက်ကမှန်လာခေါက်တာကိုနောက်တစ်ယောက်ကနောက်ကနေမှန်ကွဲသွားမယ်ဆိုပဲ အဲ့တာတော့ကြောက်ကြသားပဲ
နောက်ဆိုတစ်ယောက်ထဲကားမောင်းလို့အဲ့လိုကောင်မျိုးတွေတွေ့ရင်ရှောင်ကြပါ ပြန်လဲပြောမနေနဲ့တော့လေကုန်တယ် သူ့စရိတ်နဲ့သူသွားလိမ့်မယ် အခုခေတ်ကကိုယ်ဖြစ်ရင်ကိုယ်ခံပဲ ဘယ်သူမှဝင်ကယ်မှာလဲမဟုတ်ဘူး!Nay Lynn Aung
ရနျကုနျမွို့မှာတောငျမငျးမဲ့စရိုကျဆနျဆနျမူးရူးပွီးလုပျခငျြတာလုပျခှငျ့ရနပွေီလား? ။ ဒီနမေ့နကျစောစောကနျတျောကွီးပတျလမျးထဲတှငျကားမောငျးနရေငျး ကားတဈစီးကအတငျးမရမကလိုကျကြျောတကျဖို့လုပျနတောကွုံရတယျ
လမျးကလဲကဉျြးနတောဆိုတော့ ပွီးတော့အောကျလမျးကွောမှာ လဲရပျထားတဲ့ကားတှရှေိတာနဲ့ကြျောတကျဖို့ကအဆငျမပွဘေူး ဘေးနားကနလေီဗာအတငျးနငျးပွီးအရှကေို့ အတငျးပွနျဝငျဖို့လုပျနလေို့ နဲနဲစိတျတိုလာတာနဲ့ခပျမွနျမွနျမောငျးလိုကျမိတယျ
ပွီးလဲပွီးရောမီးပှိုငျ့မိတော့ဘေးကှကွေ့ောကနကြေျောပွီးမီးပှိုငျ့လမျးမပျေါကိုကနျ့လနျ့ရပျတယျ …..ဆဲတာကလဲအမြိုးကိုစုံနတောပဲ taxiနဲ့လူကငါးယောကျလောကျပါတယျကားထဲကိုအခွနေကွေညျ့ပွီးတဈယောကျထဲဆိုတော့ပွသနာလုပျဖို့ဆငျးလာပွီးမှနျလာခေါကျတယျ
မီးကစိမျးနတောတောငျ ကနျ့လနျ့ကွီးမီးပှိုငျ့ထိပျမှာပိတျရပျထားတယျ sorryပါ သတ်တိမရှိတာမဟုတျဘူး …မူးရူးပွီး ငါးယောကျတဈယောကျဆှမျးကွီးဝိုငျးလောငျးဖို့လုပျနတေဲ့ကောငျတှနေဲ့ရနျဖကျဖွဈလောကျရအောငျဉာဏျမနညျးဘူး ဦးနှောကျရှိတယျလေ
ပွီးတော့ကားကိုလမျးမပျေါကနပွေောငျးပွနျတှကှေသှေ့ားတယျ ရုပျရှငျတှထေဲကအတိုငျးပဲ ဘုရားစူး street fighter တှေ တဈယောကျကမှနျလာခေါကျတာကိုနောကျတဈယောကျကနောကျကနမှေနျကှဲသှားမယျဆိုပဲ အဲ့တာတော့ကွောကျကွသားပဲ
နောကျဆိုတဈယောကျထဲကားမောငျးလို့အဲ့လိုကောငျမြိုးတှတှေရေ့ငျရှောငျကွပါ ပွနျလဲပွောမနနေဲ့တော့လကေုနျတယျ သူ့စရိတျနဲ့သူသှားလိမျ့မယျ အခုခတျေကကိုယျဖွဈရငျကိုယျခံပဲ ဘယျသူမှဝငျကယျမှာလဲမဟုတျဘူး!Nay Lynn Aung
Previous Article အမှန်တရားကိုပြောတတ်ခြင်းရဲ့ စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာကောင်းကျိုး(၁၀)မျိုး
Next Article ကင်မ်နှင့်ဂျပန်တွင် ထိုးသတ်ရမည့်ပွဲအတွက် အရမ်းရင်ခုန်ပြီး သတိထားပြီ ယှဉ်ပြိုင်ရမည်ဟု အောင်လအန်ဆန်ပြော